Indlela yokusebenzisa igumbi | Ota Ward Plaza
Igumbi lokuhlangana 1.2.3.4
Igumbi lokuqala laseJapan
Igumbi leti, igumbi lobugcisa
Indlela yeLottery Thatha inxaxheba kwi-lottery kwi-Ota Citizen's Plaza Hall encinci.
Indlela yexesha lesicelo Ukwamkelwa kwamkelwa kwiholo encinci yeOta Ward Plaza ukusuka nge-13: 20 ukuya ngeye-14: 00 ngosuku lweLotto.
(Lottery iqala ngo-14: 00) Ukwamkelwa kwamkelwa kwiholo encinci yeOta Ward Plaza ukusuka nge-9: 20 ukuya ngeye-10: 00 ngosuku lweLotto.
(Lottery iqala ngo-10: 00) Ukusukela ngomhla we-4 ukuya ekupheleni kwenyanga, kwiinyanga ezine phambi kwenyanga yokusetyenziswa, faka isicelo kwi-Uguisu Net, e-Ota Ward Plaza, okanye kwiwindow yeOta Ward.
Umhla wokugqibela wokuhlawula Ukusukela kumhla we-lottery ukuya kwi-20 yenyanga enye
Ixesha lokufumana Plaza yabemi beDaejeon
(Ngaphandle kweentsuku ezivaliweyo) Pl Iplaza yabemi baseOta
(Ngaphandle kweentsuku ezivaliweyo)
Indawo nganye yewadi
Umhla wokugqibela wokuhlawula Nceda uhlawule ngexesha lokufaka isicelo.
Ukuba ufaka isicelo kwi-Intanethi, nceda uhlawule ngaphakathi kweentsuku ezili-14 ukusukela kumhla wesicelo.
Ukuba ufake isicelo kwikhawuntara, nceda uhlawule ngexesha lokufaka isicelo.